Momba anay - Handan Qifeng Carbon Co., Ltd.
Handan Qifeng Carbon Co., Ltd. dia mpanamboatra gazy karbonika lehibe any Shina, manana traikefa famokarana mihoatra ny 15 taona, afaka manome fitaovana sy vokatra karbonina amin'ny faritra maro. Izahay dia mamokatra indrindra ny Carbon Additives (CPC & GPC) sy ny electrode grafita miaraka amin'ny naoty UHP / HP / RP.
Taorian'ny ezaka nandritra ny taona maro, ny vokatra avy amin'ny orinasa Qifeng dia nankatoavin'ny mpanjifa anatiny sy vahiny ary fiaraha-miasa lalina. Ny tanjontsika: fiaraha-miasa indray mandeha, fiaraha-miasa maharitra! Amin'izao fotoana izao ny orinasanay dia miompana indrindra amin'ny fandefasana coke petrole vita amin'ny kajy isan-karazany ny haben'ny sombina sy ny electrode electrode Diameter avy amin'ny famokarana sy ny varotra 75mm ka hatramin'ny 1272mm, ny solifara ambany sy solifara vita amin'ny solifara vita amin'ny solika vita amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ataon'ny matihanina izay ampiasaina amin'ny fitaovana anode vita amin'ny alim-boaloboka. , fandefasana vy sy gazy vy, famokarana diôdiôro titanium, fitaovana katôlika bateria lithium, indostrian'ny simika, sns
Ny orinasan-tsika dia manana fitaovana famokarana karbonina kilasy voalohany, teknolojia azo antoka, fitantanana henjana ary rafitra fanaraha-maso tonga lafatra, ny laboratoara fitiliana kalitao vokatra tonga lafatra dia afaka miantoka fa ny entana rehetra mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, manana ekipa lozisialy goavambe izahay, miantoka ny ny fiarovana ny entana tsirairay tonga ara-potoana tonga tany amin'ny seranan-tsambo. Qifeng dia mifanaraka amin'ny torolàlana manome antoka ny kalitao sy ny habetsahana ary koa ny serivisy tena tsara. Ny fahafaha-manondrana isam-bolana mihoatra ny vokatra 10.000 taonina, ary lavitra amin'ny orinasa tsy miankina eto an-toerana izahay.
Manantena fatratra izahay hiara-hiasa amin'ireo namana eran'izao tontolo izao hanangana an'i Qifeng ho lasa orinasa miaraka amina herim-po bebe kokoa, sahy mihantsy, fanavaozana mitohy ary fampandrosoana mahery vaika.